Itsva yeLinux Mint Logo Yakaziviswa Pamwe Neinouya Idzidzo | Kubva kuLinux
Itsva yeLinux Mint logo yakaratidzwa pamwe nekuuya kunovandudzwa
Luis Lopez | | Chitarisiko / Kuita munhu
Linux Mint iri pakati pe kugadzirisazve izvo zvinokanganisa webhusaiti uye logo uye mazuva mashoma apfuura Clem Lefebvre akatipa rumbono rwekuti zvaizotaridzika sei kana kugadzirisa patsva kwapera.
Chekutanga pane zvese, zvinofanirwa kutaurwa kuti kungova kungotarisa, hapana chakaiswa mudombo uye dhizaini rese rinogona kuchinja zvakanyanya mushanduro yayo yekupedzisira.
Iyo logo iri muchikamu chekuyedza uye maneja weprojekti anoratidza kuti yakagadzirirwa nenzira yekuti inogadzirisa matambudziko ese eiyo yazvino vhezheni senge yakapaza kuyerwa.
"Isu tanga tichishanda pane izvo zviputi kwenguva. Mukuburitswa kwakapfuura isu takaburitsa flat, semi-flat uye inomiririra vhezheni yazvino logo asi isu hatigone kubvisa zvese zvikanganiso tisina kubvisa muganho kubva pamashizha chimiro”Ndinotsanangura.
Mukati mekunatsiridza mune inotevera Linux Mint
Kune rimwe divi, Lefebvre akataurawo nezvekuvandudza mashandiro akaitwa mwedzi wapera muCinamoni.
Somuenzaniso, zvese zviri zviviri DocInfo neAppSys zvakagadziridzwa uye kurerutswa, sezvacherechedzwa muziviso yepamutemo, nepo maneja wehwindo achifanira kukurumidza kuvonga nekudzora kwekuisa lag. Iyo yekushandisa menyu inomhanya zvakapetwa kaviri nekukurumidza sekutanga.
Iyo yekuvandudza maneja yakagashirwa kutariswa panguva ino, iine hunyanzvi hunyowani senge otomatiki kubviswa kwemapakeji ane chekuita neyakare tsanga uye ayo asingachadiwe nehurongwa. Chekupedzisira, mintreport, inozivikanwawo seSystem Reports, ine yakanatswa interface ine XApp sidebar uye peji idzva rehurongwa ruzivo. Linux Mint 19.2 inosvika imwe nguva muna Chikumi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Itsva yeLinux Mint logo yakaratidzwa pamwe nekuuya kunovandudzwa
jose gonzalez akadaro
Iko kuchinja kwakanaka, makambani anofanirwa kugara achizvivandudza. uye iyo nyowani logo dhizaini inoenderana nemaitiro
Christian Mulatillo Panduro akadaro
Ndokumbirawo, nepo chiri chokwadi kuti Linux ine zvakawanda zvakanaka, unogona here kunyora chinyorwa chekuti Linux inoshanda sei nemakambani anotengesa ese-mu-one makomputa uye anobata skrini.
Pindura kuna Christian Mulatillo Panduro
Mario Anaya akadaro
Ini ndinonyatsoda kuisa Linux Mint, ndakazviona ndikadanana nesystem, ndakachiisa kakati, nguva dzose nemhedzisiro yakaipa.
Iyo yakakurumbira UEFI BIOS, haindibvumidze kuti ndipinde iyo system, ndosaka ndichiifuratira. Ini ndakateedzera akati wandei ma tutorials ekuremadza iyo UEFI asi zvakanditora kuenda kuGRUB mune isingagumi chiuno uye pakanga pasina chandaigona kuita kunze kwekuvhara pasi uye kutangazve muchina.
Kana paine chero munhu anoziva kudzikisira iyo damn UEFI, ndinotenda
Pindura kuna Mario Anaya
Ndinonzwa ndakanyatsozivikanwa. Ini ndagara ndichiguma ndichidzokera kuWindows nekuda kweUFI, ​​ndakaedza zvese zvinobuda mumaticha asi hapana chakazvigadzirisa. Zvinoshungurudza kuve usingazeze kushandisa Windows uye kusave wakasununguka kushandisa chero software yaunoda.
Mhoroi, kana iwe ukagadzira iyo live usb, gadzira iyo neEFI sarudzo. Pamwe kana uchiisa, inokukumbira iwe chikamu che500megas EFI, iwe unogadzira icho uyezve iyo / y / kumba.
PaYouTube, vii tutos muchirungu
Pindura kuma sds
Ini ndinoshandisa Linux kunze kwekukosha. Nechimwe chikonzero Windows 10 yakatanga kukanda chikanganiso, uye mushure mekumisikidza kumisikidza uye kuisazve, yakaramba ichirovera. Nei ndichiregeredza uye ini handina basa nei, chete kuti ini ndaida muchina kuti ushande uye ini ndaisakwanisa kufilosofi nezve zvazvinoita.
Kuti udzivise kusiya iyo laptop irara isina basa, isa linux Mint uye izvo zvandinotsanangura neEFI. Ini ndakaisa Ubuntu Linux sekupedzisira kusevha uye ikashanda. Haisi iyo OS yandinofarira zvakanyanya asi inondiburitsa mumvura panguva ino
Ndatenda neruzivo .. ndichaedza kuti ndione zvinoitika
Raul Fernandez akadaro
Edza kuremadza Yakachengeteka Boot. Pinda iyo UEFI (muWin10 zvinoitwa kubva kuZvirongwa-Zvidzoreso uye Kuchengetedzwa-Kudzoreredzwa -Kutangisa Kwekutanga).
Kana ikasashanda (kana iwe usingakwanise kuzviita), batanidza neInternet panguva yeiyo Live chikamu, uye usatarise kana «Isa multimedia codecs, Wifi ...) zvichingodaro.
Pindura Raúl Fernández
Iyo inogona zvakare kuve bootloader dambudziko. Kana iyo logo ikaonekwa pakutanga, pinda kiyi yekusarudza pekubhururuka kubva (kazhinji F12) uye uone kana chimwe chinhu senge ubuntu chioneka (st uye mashoma mashoma). Ndiyo Mint, rova ​​pinda uye GRUB inofanira kuoneka.
Kusimudzira: Bibliographic Reference Manager
Linux Kernel 5.0 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo